Mcommerce သည်အီလက်ထရွန်းနစ်ရောင်းဝယ်မှုထက် ၂၀၀% ပိုမိုမြန်ဆန်လာသည် Martech Zone
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, စက်တင်ဘာလ 21, 2016 စနေနေ့, ဖေဖော်ဝါရီလ 13, 2021 Douglas Karr
သင်၏လက်ကိုင်ဖုန်းတွင်ပထမဆုံး ၀ ယ်ယူခဲ့သောပစ္စည်းကိုသင်မှတ်မိသလား။ ကျွန်ုပ်၏ပထမဆုံးမိုဘိုင်းဝယ်ယူမှုကိုပြုလုပ်သောအခါအမေဇုန်သို့မဟုတ်စတားဘတ်ခ်မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းအားဖြင့်ဖြစ်မည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်။ မိုဘိုင်း ၀ ယ်ယူမှုတွင်အကန့်အသတ်များရှိခဲ့သည်။ တစ်ခုမှာအသုံးပြုရန်လွယ်ကူခြင်းနှင့်နည်းပညာဖြစ်သည်။ မိုဘိုင်းဖုန်းဝယ်ယူမှုသည်ယခုအခါဒုတိယအနေနှင့်ဖြစ်လာသည် Coupofy မှစာရင်းဇယား သက်သေပြပါ။
တကယ်တော့၊ e-commerce သည် ၁၅% တိုးလာလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်သော်လည်း၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင်မိုဘိုင်းကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးသည် ၃၁% တိုးတက်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်!
ကမ္ဘာအ ၀ ှမ်းတွင်ဂျပန်၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းနှင့်တောင်ကိုရီးယားတို့သည်တစ်နှစ်လျှင် ၅၀% နီးပါးတိုးတက်မှုနှုန်းဖြင့် ဦး ဆောင်နေသည်။ သြစတြေးလျနှင့်နယ်သာလန်နိုင်ငံတို့ကမိုဘိုင်းကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးကို ၃၅% တိုးတက်စေခဲ့သည်။
၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်မိုဘိုင်းကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးတွင်တိုးတက်မှုအများဆုံးသောကုမ္ပဏီ ၅ ခုမှာ ၆၃၄ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် GOME လျှပ်စစ်သုံးပစ္စည်း၊ Nebraska Furniture Mart ၅၀၀%၊ Yihaodian ၄၅၆ ရာခိုင်နှုန်း၊ VIPShop Holdings ၄၅၁ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် HappiGo ၃၈၉% တို့ဖြစ်သည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏အကြီးဆုံးသောမိုဘိုင်းကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးကုမ္ပဏီများမှာ TicketMaster, Apple, Target, QVC နှင့် Kohl's တို့ဖြစ်သည်။ အံ့သြစရာမှာအမေဇုံသည်ထိပ်ဆုံး ၅ တွင်မပါဝင်ပါ။ ဤကုန်သည်များအားလုံးမြင်ကြပြီ န်းကျင် 50% တိုးတက်မှုနှုန်း မိုဘိုင်းအသွားအလာနှင့်အရောင်း၌တည်၏။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအတိုင်းအတာအရ e-commerce ခေါင်းဆောင် ကို eBay စားသုံးသူများအနေဖြင့်စမတ်ဖုန်းနှင့်တက်ဘလက်များကို ၀ ယ်ယူခြင်း၏တန်ဖိုးမှာ ၀ ယ်ယူခြင်း၏တန်ဖိုးအဖြစ်ပိုမိုလွယ်ကူစေရန်အတွက်ဆက်လက်အာရုံစိုက်နေဆဲဖြစ်သည် နှစ်စဉ် 21% ကြီးပွားသတည်း.
အဆိုပါ ပျမ်းမျှအမှာစာတန်ဖိုး Tablet ဈေးဝယ်သူတစ် ဦး သည်ဒေါ်လာ ၁၀၀ ဖြစ်ပြီးစမတ်ဖုန်းပြောင်းလဲမှုမှစျေးဝယ်သူသည်ပျမ်းမျှအားဖြင့် ၈၅ ဒေါ်လာဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် Android စမတ်ဖုန်းမှမိုဘိုင်းစျေးဝယ်သူများသည်သူတို့၏ iOS တန်ဖိုးများထက် ၂၂% ပိုမို၍ အမှာစာတန်ဖိုးရှိကြသည်။ သို့သော် Android ထုတ်ကုန်များတွင်စျေးဝယ်သူသုံးဆပိုများသည်။ ၎င်းသည်သင်၏အတွေ့အကြုံကို iOS နှင့် Android တို့တွင်အလုပ်မလုပ်စေရန်လုံလောက်သည်။
Tags: Amazonပန်းသီးပျမ်းမျှအမှာစာတန်ဖိုးကွမ်းခြံကုန်းeBayအီလက်ထရောနစ်ကူးသန်းရောင်းကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ m-commerce ကိုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ mcommerceဂျပန်နိုင်ငံတွင်kohlsမိုဘိုင်းကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးအော်ဒါတန်ဖိုးQVCေတာင္ကုိးရီးယားStarbucksမိုဘိုင်းအမိန့်တန်ဖိုးကိုနှိုင်းယှဉ်တက်ဘလက်ပစ်မှတ်တကယယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း